मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधन मा के छ ? – HamroSamrachana
मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधन मा के छ ?
हाम्रो संरचना आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ 665 Views
संविधान संसोधनको नाममा के भइरहेको छ ? भन्ने बिषयमा नेपाली जनताले थाह पाउन जरुरी छ । संविधान संसोधनको लागी हिजो राती अबेर १० बजे संसद सचिवालयमा दर्ता गरी जिकिर गरीएको धारामा उल्लेख गरीएको बिषय र संविधानको धारामा रहेको बिषय खासै भिन्नता रहेको छैन ।
काठमाडौं/ संविधान संशोधन विधेयकमा सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट संशोधन मध्यरातमा दर्ता भएको छ । राति अबेर १० बजे मात्र संशोधन संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । संशोधन दर्ताका लागि दिएको समयको अन्तिम दिन अबेर मात्र सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए । सत्तारुढ दलले राखेको संशोधन पास भए अब प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा सम्वन्धित प्रदेशको सहमति चाहिने छैन, परामर्श मात्र लिइनेछ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ । मधेसी मोर्चाले यसलाई अस्वीकार गरेपछि सरकार मधेसी मोर्चाको माग अनुसार सम्वन्धित प्रदेशको सहमतिको सट्टा परामर्श शब्द राख्न सहमत भएका छन् ।
यस्तै संघीय आयोग गठनसम्वन्धी धारा पनि संशोधन परेको छ । सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट परेको संशोधनले आयोगको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने सुनिश्चित गरेको छ ।
संशोधन माओवादीका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत, कांग्रेसका चिनकाजी श्रेष्ठ, राप्रपाकी कुन्ती शाही, तमलोपाका जंगीलाल राय र सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले हालेका हुन् ।
सिरहामा घाटी रेटी बालकको हत्या र एक बालकको डुबेर मुत्यू
जुम्लाको हिमशिखर माविका ३० जना केटीहरु एकसाथ कामने समस्या बाट पिडीत